N'ịbụ nke Ihe Omume Google Wave Na-atụgharị | Martech Zone
Ndị ọrụ Google Wave na-emenye ụjọ
Thursday, January 7, 2010 Thursday, June 18, 2015 Adam Obere
M na a na-eji Egwuregwu Google ugbu a ruo ọtụtụ ọnwa. Mgbe mbụ m nụrụ banyere Wave, echere m na ọ dị ka ọ ga-atọ ụtọ. M mgbe ahụ na-ele incredibly ogologo video banyere ngwá ọrụ ahụ ma jupụta n'ike na ikike nke ihe yiri ka ọ bụ mgbanwe na-echere na nkwukọrịta n'ịntanetị.
Mgbe m rịọchara ọkpụkpọ òkù ma mesịa nweta ohere ịbanye na ọrụ m ji nwayọọ nwayọọ na-eburu njikọ ndị ọzọ na ndị ọrụ ibe m nke nwekwara ohere Egwuregwu Google. Maka ngwa nkwukọrịta, ọ na - eme ka ọ ghara inye aka ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịgwa ndị gị na ha na - emekọrịta ihe kwa ụbọchị.
Egwuregwu Google kwere nkwa inye ohere maka ịhazi ihe omume, ịkekọrịta nkwukọrịta na dọkụmentị kesara. Nwere ike ịkekọrịta foto, echiche, vidiyo, ndetu, akwụkwọ, na ọbụlagodi egwuregwu niile n'otu ikpo okwu n'ime windo nchọgharị dị ugbu a.
Nke bụ eziokwu bụ na enwebeghị m ezigbo mgbanwe na nkwukọrịta maka onwe m. Ihe kachasị agbatịwo m hụworo Egwuregwu Google bụ mmekota mụ na otu enyi m na-ede maka otu blọọgụ m. Anyị na-ekerịta ebumnuche, echiche, ajụjụ na atụmatụ dị iche iche n'etiti onwe anyị na Wave na ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
M ka na-eche ya ka ọ pụọ n'ezie n'agbanyeghị. Echere m na ụzọ ha ga-esi tinye ya n'ime oke ga-abụ ihe fọrọ nke nta ka ọ dochie ndị dị ugbu a Gmail arụmọrụ na Egwuregwu Google. Oh, ma ka ha nọ na ya, jikọtara ọnụ Google Akwụkwọ na Google Kpaa nkata ebe ahụ. Ma eleghị anya, ọbụna a fesaa nke Otu Google iburu kwa.
M ka na-eche Egwuregwu Google ga-agbanwe nkwukọrịta n'ịntanetị. Echeghị m na ọ ga-eme ruo mgbe onye ọrụ ohere sara mbara nwere ike ịbanye n'elu ikpo okwu na ndị ọzọ Google arụ ọrụ ma ọ bụ webata ma ọ bụ kpochapụ.
Tags: google ifegoogle +
Etu aga - esi bulie Blog gi ma jigide oge ọchụchọ
Ọ Bụghị SEO Ọkachamara ka Nha
Jason, ị chịkọtara na paragraf ole na ole, kpọmkwem ihe m chere gbasara Google Wave. Achọrọ m n'ezie ka ọ gbanwee ụzọ m si arụ ọrụ kpam kpam, ma enwere m mmetụta nke ukwuu.
Jenụwarị 7, 2010, elekere 8:09 nke abalị
Jason, ezigbo post! Ikpughere ndị na-ege ntị ebe a na onye na-ahụ maka teknụzụ n'ezie na onye na-ede blọgụ na-eji Wave were ogologo oge. Daalụ!
Jenụwarị 7, 2010, elekere 9:59 nke abalị
Jason, enweghị m ike ikwenye karịa.